James Ellroy, Pepe Carvalho Mubairo paBCNegra. Iyo Mad Imbwa uye ini | Zvazvino Zvinyorwa
Chikamu chelaibhurari yangu yeEllroy.
Zuva rapfuura 1 munyori weAmerica James ellroy akagamuchira iyo Pepe Carvalho Mubayiro in the Nhema Novel Mutambo we Barcelona zvinopera nhasi. Mumwe wevanonyanya kukosha vanyori venyika veiyo genre, Ellroy zvakare hunhu maari iye kune iye uyo tsananguro ye «Rabid imbwa " Hazvisi kuenda nemaune. Iye zvino a shanduro itsva ye Makona angu erima, nhoroondo yehupenyu hwake yakasviba kana kupfuurisa kupfuura iwo emanoveli akamonyoroka, akaomarara uye akapfuura nhema kuti anonyora.
Ndiani anoziva ini anoziva nezvenyaya yangu yerudo naye, kudanana kusvika pakutanga kwemireniyamu ino. Ndine chikwereti kwaari chikamu chakanaka cheangu mhedzisiro chishuwo cheiyo genre mune yayo yakasvibisa vhezheni, yechisimba uye visceral vhezheni. Nguva yakareba yapfuura ndaiva nechikwereti kwaari mazwi mashoma, saka nhasi pane chinyorwa chaizvo chaizvo pachedu.
1 Imbwa Inopenga
2 Iyo Mad Imbwa uye ini
2.1 Bud chena
3 Asi zvakare ...
4 Uye ivowo ...
5 Nhoroondo dzake
Ndinonakidzwa nemutauro wakashata, mapurisa achirova musungwa ...
Ndini mambo wenyaya yematsotsi.
Ini handipe shit nezve izvo zviripo.
James Ellroy, Barcelona, ​​Kukadzi 2018
NaEllroy hapana nzvimbo yepakati. Chero kuda kana kuvengwa zvakaenzana, semunyori kana semunhu. Asi kana iwe uine shungu mumativi ese ari maviri, PASSION. Kana yako Literary network yeropa, mhosva, huori hwemapurisa uye kupatsanurwa kwakaipisisa kwehunhu hunosemesa hwevanhu, zvakatooma kutiza. Kana iwe uchifungidzirwa naye yakasarudzika manyorerwo e telegraphy nemutsipa kucheka pasina anesthesia, uchatapukirwa pasina mushonga. Uye kana iwe uchifadzwa neyeakasarudzika gallery yemavara, imwe neimwe zvakare tsotsi, kuvhiringidzika, hutsinye, hutsinye kana huwori, uye zvakadaro, munhu, hauchazovizve neruponeso.
Ellroy, Angelo anozvipira anobva kuguta rekumusha kwake anga asingade kuverenga iyo nguva (uye haafarire) kupfuura 1972, Iye akafanana nehunhu kana kupfuura avo vari mumanoveli ake. Asingaremekedze, histrionic, anodenha, anopisa mune ake mazano uye nemazwi ake, narcissistic uye zvinonzi zvinokanganisa kana kukanganisa. Mazuva ano, pasina kuenda kumberi, iri kusiya maparera senge ezvematongerwo enyika asiri iwo seakare apfuura. Nekuti kana chimwe chinhu chiri Ellroy chiri chaizvo zvisiri izvo munzira dzose. Uye izvo, munguva dzino, zvine hushingi uye kugona.
Hunhu hwake hunopfuura zvinyorwa zvake zvakaomarara kana kuti zviratidze. Iva protagonist we inotyisa nyaya yemunhu muhudiki, yaive sei iyo haana kumbogadzirisa kubata chibharo uye kuuraya amai vake, zvirokwazvo inoratidza kuvepo kwechero ani. Maitiro aakazviita munaEllroy anogona kuoneka zvakadzama pasina kuvharirwa mune zvambotaurwa Makona angu erima. Asi kuongorora nyika yaanogara zviri nani kuverenga zvinyorwa zvake. Izvo zvichiripo vashoma vanyori vorudzi rwake vanomufukidza uye asiya mucherechedzo wake mune dzakawanda.
Ndiina Jo Nesbø muBarcelona, ​​San Jordi, 2015 (Mufananidzo naLa Vanguardia). NaDon Winslow mune ino BCNegra, 2018 (Mufananidzo naEva Cuenca pa Twitter).
Iyo Mad Imbwa uye ini
James ellroy - LA Chakavanzika (1990)
Kudonha Kwangu MuHero naEllroy zvakaitika pakutanga kwemireniyamu ino. Izvo zvaive zve LA Chakavanzika, naCurtis Hanson (1997), iyo yandisina kuona mumabhaisikopo panguva iyoyo, asi muna 2000. Kubva ipapo ndakatadza kuverenga nguva dzandakavepo. Asi yaive mhosva yake zvakanyanya:
Kana iyo kududzira izvo zvino zvisingazivikanwe Russell Crowe White haana kureva iro pfuti kumoyo iro rakandityora kudanana, izvozvi ndingadai ndisiri kutaipa aya mazwi. Kana mweya wangu ungadai usina kunyatsoparadzwa pandakau "ona" mukugadzirwa kwawo kwepakutanga. VaCrowe vane mhosva yekuda kwakawanda muhupenyu hwangu. Chainyanya kushamisa kwaive kukweretesa kumeso kwake nemuviri kumunhu wekunyora uyo ari pamusoro pevane gumi avo vandibata zvakanyanya mune zvakadzika zvekunyora.
Bud White ndeyangu epitome yemunhurume literary hunhu hunogona kundikwezva zvakanyanya uye kubata. Iyo izere nemakona, cmusiyano wakakwana wehutsinye nemhirizhonga yakanangana neshure kwekutambudzika uye manzwiro akasanganiswa, iyo inokurudzira chikuru chendinofarira. Nekuti nei uchiramba, ini ndiri muverengi asiriye muverengi uye munyori. Handigoni kuzvibatsira. Tese tine yedu yakasviba divi uye yangu haina kugona kudzivirira kukumikidza inoverengeka nezwi fan yekunyepedzera iyo inotenderera ichitenderedzwa nevashandi.
Asi zvakare ...
kuti mushure mekuverenga LA Chakavanzika, vamwe vese vakawa, vakatevera uye nekumanikidza, nekuti ndakabatwa nenzira iyoyo yekurondedzera Ellroy, izvo chimiro chakanetsa dzimwe nguva, kudzipwa, submachine pfuti inopfura mabara padhuze nepakati. Chimiro chinogona kukukurira, chingangoita dzungu, chinokukurira nekuoma kwekutaurisa kwacho. Kwete kukodzera kune vese vateereri, kunyangwe kune vese vateveri veiyo genre. Uye zvirokwazvo isina kukodzera matumbu akaomarara. Kune izvo zvinowedzerwa zviuru zvezviuru uye zvidimbu, chiuru chaicho uye kunyepedzera vatambi vanofambidzana mune tapestry neiyo epicenter muguta rine mabhaisikopo zvakanyanya kuitira kuti nzvimbo dzakashata, dzenhema kana dzepamusoro dziitike.
Makumi makumi mana neavo Nhema Dahlias, 50 uye Wemasimbaose LAPD's Ropa Kisimusi nemukuru wake ane mukurumbira, William H. Parker. Iwo makumi matanhatu uye iyo imwechete aura yehutsvene uye huori hwe JFK. Iyo FBI ye EJ Hoover, mupfumi Howard Hughes, mhomho Sam Giancana, Mickey Cohen, Santo Trafficante kana Jack Dragna. El Goridhe hollywood Uye izere nezvinonyadzisa, maseneta mablacklist McCarthy, dambudziko redombo, mamisheni epachivande mukati Kiyuba yeCIA mamirari ... Iyo yakanakisa yeakashata eNorth America XNUMXth century yakataurwazve kakawanda mukugadzirisa zvakanyanya nyaya yayo, senge yaEllroy.
Uye ivowo ...
mutikitivha Fritz shava, mapurisa Bucky Bleichert naLee Blanchard, Sargeant Lloyd Hopkins, anotyisa Pete bondurant, dhiabhori Captain Dudley Smith, mumiriri Dwight hollyla Dzvuku Mambokadzi, woumwari Veronica nyanza mukutarisa kwehure Lynn bracken, iyo inotyisa nzira yemhondi. Uye zvimwe zvakawanda, nekuti kune zviuru zvevanhu vakuru vakagadzirwa nembwa huru kwazvo yekunyora kubva kuguta rizere nengirozi dzakadonha.
Asi pamusoro pezvose, kuti kana munhu achizvitutumadza pakuve mutema genre muverengi, Ellroy ndechimwe chezvinhu zvakakosha. Iwe unogona kutanga neakawedzera echinyakare mamiriro uye kusimudzira, senge yekutanga. Iyo Sajeni Hopkins trilogy haisi yakaipa mavambo. Asi zvakare, hongu, Dema Dahlia. Uye zvechokwadi iyo LA Quartet Iwo mazita akawanda, ngatiti, kusagadzikana kana kunetsa, kwandiri Muurayi weHighway o Matanhatu ema greats.
Requiem yaBrown. heyi Kugadziriswa kwemafirimu 1998 inotarisana naMichael Rooker.
Kupenga nezve donna
Dema Dahlia. Brian De Palma akaiendesa kune iyo cinema in 2006.
Matanhatu ema greats
Yechipiri Los Angeles Quartet
Dutu iri (Kuuya manje)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » James Ellroy, Pepe Carvalho Mubairo paBCNegra. Iyo Mad Imbwa uye ini
Xosé D ChiFrench akadaro
Ndinokukorokotedzai papeji renyu. Kubva kuArgentina. Ndinovimba kuti rimwe zuva muchazotaura nezvebhuku rangu
Pindura Xosé D French Diéguez
Waiziva here nezve kuvapo kwemasifundi echinyorwa chekugadzira?